လှိုငျသာယာ၏ လှုပျနှိုးခွငျး ခံလိုကျရသော တရုတျနဂါးကွီး အမောကျထောငျလာပွီ - Celefans
HomeLocal Newsလှိုငျသာယာ၏ လှုပျနှိုးခွငျး ခံလိုကျရသော တရုတျနဂါးကွီး အမောကျထောငျလာပွီ
August 7, 2021 Cele Fans Local News Comments Off on လှိုငျသာယာ၏ လှုပျနှိုးခွငျး ခံလိုကျရသော တရုတျနဂါးကွီး အမောကျထောငျလာပွီ
တရုတျတို့ ဖကျမှ စကျရုံမြား ဖကျြဆီးခံရသညျ ဆိုသျောလညျး ၎င်းငျးတို့ အပွောကို ထောကျခံသညျ့ သကျသေ အထောကျအထားမြား မတှရေ့၊ ဤသညျက တရုတျတို့ မှ အကပျြအတညျး ကလြာသညျ့ အခါတိုငျး Wolf Warrior Diplomacy ဟု ထငျရှားသညျ့ နိုငျငံခွားရေး မူဝါဒကို ထုတျသုံးလာခွငျးဟု ပွော၍ရပသေညျ။
ဆိုလိုသညျက မိမိတို့ အကြိုးစီးပှားကို ခွိမျးခွောကျခံရသညျဟု ယူဆတိုငျး ပွညျတှငျးရေးဟု မယူဆတော့ပဲ အငျအားအသုံးပွုမညျ ဆိုကာ နိုငျငံတနိုငျငံ၏ အနအေထားကို ပကျြပွားစရေနျ ရညျရှယျပွီး တရုတျအစိုးရ မီဒီယာ မြား နှငျ့ ဆိုရှယျမီဒီယာ မြား မှတဆငျ့ ခွိမျးခွောကျလာခွငျးပငျ ဖွဈသညျ။
တရုတျသညျ မငျးအောငျလှိုငျကို လိုလာခွငျး မရှိသညျမှာ ထငျရှားသျောလညျး တဖကျတှငျ ၎င်းငျးတို့၏ အိမျနောကျ ဖေး၌ လူထု လှုပျရှားမှု အသှငျဖွငျ့ အာဏာပိုငျမြားကို ဖွုတျခြ နိုငျခဲ့ပွီ ဆိုသညျ့ အတှေး အချေါမြား ၎င်းငျးတို့နိုငျငံ သားမြားထံ ကူးစကျလာမညျ့ အရေးကို လှနျစှာ စိုးရိမျထိတျလနျ့နကွေသညျ။
ရှဈလေးလုံး အရေးတျောပုံကွီး နှငျ့ လ အနညျးငယျသာ ခွားကာ တရုတျ ကြောငျးသားမြား၏ တီယနျမငျ အရေးအခငျးကွီး ပျေါပေါကျလာခဲ့ရ သညျကို အမှတျရနဆေဲ ဖွဈနလြှေငျ ဤအခကျြမှာ ဖွဈလာဖို့ အလားအလာ နညျးနသေညျ။
လကျရှိတှငျ တရုတျသံရုံး၏ ကွညောခကျြသညျ ရာနှငျ့ခြီ၍ အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ရသူမြား အပျေါ စာနာစိတျ အလြှငျး မရှိ၊ အတ်တကွီးသူ မိမိတို့ အကြိုးစီးပှားကိုသာ ကွညျ့သူမြားအဖွဈ လူထု၏ မုနျးတီးခွငျးကို ပို၍ ပွငျးထနျလာအောငျ ဆှပေးလိုကျသလို ဖွဈသှားရသညျက အဖတျတငျသှားခဲ့ရသညျ။
တရုတျ ၏ ကွညောခကျြသညျ ပွညျသူမြားကို တိုး၍ သတျဖွတျရနျ အခကျြပေးသညျ့ စကားဟုပငျ ဧရာဝတီ သတငျးတှငျ သုံးသပျထားသညျ။ ပွညျသူမြားက တရုတျ တို့၏ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုမြား နှငျ့ ထုတျကုနျမြားကို သပိတျမှောကျကွရနျ လှုံ့ဆျော လာနကွေပွီ ဖွဈသညျ။ သို့သျော တရုတျတို့သညျ မိမိတို့ အပွဈကို မိမိတို့ သုံးသပျနိုငျခွငျး မရှိကာ ပွညျတှငျးတှငျ တရုတျ မုနျးတီးရေး နှငျ့ အကြိုးစီးပှား ပကျြစီးအောငျ ပွညျပမှ လှုံ့ဆျောပေးနခွေငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျဟု ရေးသားလာကွသညျ။
အာဏာသိမျး အဖှဲ့သညျ ၎င်းငျးတို့ ၏ လုပျရပျမြားက နဂိုကပငျ မာရှယျလောထကျ ရကျစကျကွမျးကွုတျနပွေီ ဖွဈသျောလညျး တရုတျ အလိုကြ ရနျကုနျ တိုငျး အတှငျး မွို့နယျ ၆ မွို့နယျ နှငျ့ မန်တလေး တိုငျးတှငျ ၅ မွို့နယျ အတှကျ မာရှယျလော ထုတျပွနျလာခဲ့သညျ။
ပွညျသူမြားက နောကျတှနျ့ဖို နနေသောသာ ထုတျပွနျခွငျး မခံရသော မွို့နယျ ရှိ လူထုကွီးက ၎င်းငျးတို့၏ တျောလှနျ‌ရေးသညျ အထုတျခံရသော မွို့နယျ မြားလောကျ ပွောငျမွောကျခွငျး မရှိ၍လောဟုပငျ အားငယျ လာကွသညျ။ လှိုငျသာယာ ရှိ ပွညျသူမြားပငျ အငျအား အလုံးအရငျးနှငျ့ လမျးပျေါထှကျပွီး ဆကျလကျ ဆန်ဒပွခဲ့ကွသညျကို လေးစားဖှယျ တှမွေ့ငျရပသေညျ။
Fortify Rights လူ့အခှငျ့အရေး အဖှဲ့ကွီး မှ စဈအာဏာသိမျးသူမြား သညျ နစေ့ဉျနှငျ့ အမြှ လူသတျမှု ကြူးလှနျ လာနသေဖွငျ့ ကုလ အထှထှေေ ညီလာခံ အရေးပျေါ အထူး အစညျး အဝေးကွီး ချေါယူပွီး လိုအပျသညျ့ အရေး ယူမှုမြား ပွုလုပျရနျ တောငျးဆိုလိုကျသညျ။ လုံခွုံရေး ကောငျစီ တှငျ တရုတျ နှငျ့ ရုရှား တို့၏ ဗီတို အာဏာမြား ရှိနသေဖွငျ့ ယခုအခြိနျအထိ ကွညောခကျြ နှဈခုသာ ထုတျပွနျနိုငျပသေေးသညျ။
ထိုအနအေထားကို ကြျောလှနျ၍ ကုလ အထှထှေေ ညီလာခံကွီးအား လုပျပိုငျခှငျ့ အပွညျ့ပေးထားသညျ့ Uniting for Peace ဆိုသညျ့ ၁၉၄၇ က ဆိုဗီယကျ ဗီတိုကို ကြျောလှားနိုငျရနျ ခမြှတျခဲ့သညျ့ ဆုံးဖွတျခကျြ အတိုငျး ဆောငျရှကျသငျ့သညျဟု တောငျးဆို သညျ့ ကွညောခကျြ ကို ထုတျပွနျ၍ တိုကျတှနျးလိုကျသညျ။ ထိုသို့ သော အစညျးအဝေး ကငျြးပရနျ မညျသညျ့ နိုငျငံကမဆို တောငျးဆိုခှငျ့ ရှိပွီး နိုငျငံအမြားစုက သဘောတူလြှငျ နှဈဆယျ့ လေးနာရီအတှငျး ကငျြးပပေးရနျ တာဝနျ ရှိနသေညျ။
ယခုအခါ တရုတျက ဗွောငျကကြ ဝငျရောကျ စှကျဖကျလာမညျ့ အရေး နှငျ့ မငျးအောငျလှိုငျ ၏ အာဏာသိမျး အဖှဲ့သညျ တိုငျးပွညျကို ဆကျလကျ အုပျခြုပျနိုငျစှမျး မရှိတော့သညျ့ အဖွဈကို တှမွေ့ငျလာနရေသညျ့အတှကျ တပျတှငျး တှငျ စိတျဓါတျမြား ခြောကျခြားလာနပွေီး မိမိတို့ အဖို့ ယခုလို လမျးပျေါတှငျလူမြားကို နစေ့ဉျလို ပဈခတျ
သတျဖွတျ နရေတော့မညျလား ဟု မေးခှနျးမြား သခြောပေါကျ ထှကျပျေါလာနပွေီ ဖွဈသညျ။
အရေးတျောပုံ အောငျရမညျ!!! Hla Soewai
ယမန်နေ့က တရုတ်ပိုင် စက်ရုံ ၃၂ ရုံ ဖျက်ဆီးခြင်း ခံလိုက်ရပြီဟု တရုတ် သတင်းမီဒီယာ များက ဖေါ်ပြလာ ကြပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃၂ သန်း ခန့် ဆုံးရှုံးသွားသည်ဟု ဆိုသည်။ ၎င်းတို့ ပြောဆိုချက်အတွက် သက်သေ အထောက်အထားများ မတွေ့ရသေးသော်လည်း အဆိုပါ သတင်း အပေါ် တရုတ် နိုင်ငံပိုင် CGTN ရုပ်သံ မှ First Voice ဟု ဆိုကာ ဝေဖန်ချက် ထုတ်ပြန်လာခဲ့သည်။
ထိုအထဲတွင် မြန်မာအာဏာပိုင်များက တရုတ်နိုင်ငံသားများ နှင့် အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိ သဖြင့် ပို၍ ဆိုးလာပါက ၎င်းတို့ အနေဖြင့် မဖြစ်မနေ ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရတော့ မည်ဟု ရာဇသံ ပေးသည့် စကား ပါရှိလာခဲ့ပေသည်။
တရုတ်သည် မြန်မာ၏ ပြည်တွင်းရေး သက်သက်သာ ဖြစ်သည်ဟု ပြောနေသော်လည်း ၎င်းတို့ အကျိုးစီးပွားကို ထိပါးလာသည့်အခါတွင်တော့ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်တော့မည်ဟု ဗြောင်ကျကျ စတင် ပြောဆိုလာခဲ့သည့် နိုင်ငံ အဖြစ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပေပြီ။
တရုတ်တို့ အဖို့ ပို၍ သိက္ခာကျစရာ ဖြစ်လာရပြန်သည်မှာ တိုင်ဝမ် ပိုင် စက်ရုံများကို တရုတ်ပိုင် ဟု ထင်မှတ် ခံရမည်စိုး၍ တိုင်ဝမ် အလံ လွှင့်ထူထားကြရန် နှင့် စာဖြင့် ရေးပြီး ကပ်ထားရန် ရန်ကုန်ရှိ တိုင်ဝမ် ဆက်ဆံရေး ရုံးက သူတို့၏ ကုမ္ပဏီများကို အကြံပေးစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယားကလည်း အလားတူ အကြံ ပေးလာခဲ့သည်။
တရုတ်တို့ ဖက်မှ စက်ရုံများ ဖျက်ဆီးခံရသည် ဆိုသော်လည်း ၎င်းတို့ အပြောကို ထောက်ခံသည့် သက်သေ အထောက်အထားများ မတွေ့ရ၊ ဤသည်က တရုတ်တို့ မှ အကျပ်အတည်း ကျလာသည့် အခါတိုင်း Wolf Warrior Diplomacy ဟု ထင်ရှားသည့် နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒကို ထုတ်သုံးလာခြင်းဟု ပြော၍ရပေသည်။
ဆိုလိုသည်က မိမိတို့ အကျိုးစီးပွားကို ခြိမ်းခြောက်ခံရသည်ဟု ယူဆတိုင်း ပြည်တွင်းရေးဟု မယူဆတော့ပဲ အင်အားအသုံးပြုမည် ဆိုကာ နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ အနေအထားကို ပျက်ပြားစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တရုတ်အစိုးရ မီဒီယာ များ နှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာ များ မှတဆင့် ခြိမ်းခြောက်လာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ လက်ရှိ အနေအထားအရ တရုတ်တို့ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်လာမည့် အလားအလာမှာ များလာ နေပြီဟု ယူဆမိသည်။ သို့သော် မည်သည့် အနေအထား ဖြင့် ပတ်သက်လာမည် ဆိုသည်ကား မသဲကွဲလှပေ။
မင်းအောင်လှိုင်၏အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ကျားကန်ပေးသည့် ပုံစံမျိုးလော၊ သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း တွင် တည်ငြိမ်မှု အနေအထားကို ဖေါ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဟု ယူဆပြီး လျှပ်တပြက် စစ်ဆင်ရေး မျိုး ဖြင့် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို ဖယ်ရှားပြစ်မည်လော။ သို့မဟုတ်ပါက နိုင်ငံတွင်း အခြေအနေများ ဒီထက် ဆိုးမလာရန် ဘီဂျင်းရှိ ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အနေနှင့် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး အရ အဖြေရှာရန် ပို၍ တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် လုပ်လာမည်လော။
ပထမ အချက် ဆိုလျှင် မြန်မာ ပြည် အနေအထားသည် ပြည်ပ လက်အောက်ခံ ဘဝကို မလွှဲမသေ ရောက်ရှိ သွားရပြီ ဖြစ်သဖြင့် မင်းအောင်လှိုင် မျှော်လင့်နေသလို ဆက်လက် အသက်ဆက်နိုင်ဖို့ ဖြစ်မလာသည့်အပြင် စစ်တပ် အတွင်း ကြိမ်းသေပေါက် ပြိုကွဲကာ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်လာနိုင်ပြီး အမေရိကန် နှင့် ဒေသတွင်း မဟာမိတ်များကလည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက် တော့မည် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယ အချက် သည် ပထမ အချက်လောက် မဆိုးလှသော်လည်း ကောင်းသည်ဟူတော့ ပြော၍ မရပေ။ တရုတ်အနေနှင့် ပေးဆပ်ထားရသမျှကို ပြန်လည် တောင်းခံမည် ဖြစ်ပြီး၊ အစိုးရ အဖို့ ပုံရိပ် ကောင်းလာနိုင်ခြင်း မရှိ။ မဆိုးလှသည့် အချက်မှာ ပြည်သူများ သေကြေနေမှု ရပ်ဆိုင်းသွားမည့် အရေးပင် ဖြစ်သည်။
တရုတ်သည် မင်းအောင်လှိုင်ကို လိုလာခြင်း မရှိသည်မှာ ထင်ရှားသော်လည်း တဖက်တွင် ၎င်းတို့၏ အိမ်နောက် ဖေး၌ လူထု လှုပ်ရှားမှု အသွင်ဖြင့် အာဏာပိုင်များကို ဖြုတ်ချ နိုင်ခဲ့ပြီ ဆိုသည့် အတွေး အခေါ်များ ၎င်းတို့နိုင်ငံ သားများထံ ကူးစက်လာမည့် အရေးကို လွန်စွာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြသည်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး နှင့် လ အနည်းငယ်သာ ခြားကာ တရုတ် ကျောင်းသားများ၏ တီယန်မင် အရေးအခင်းကြီး ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရ သည်ကို အမှတ်ရနေဆဲ ဖြစ်နေလျှင် ဤအချက်မှာ ဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ နည်းနေသည်။
တတိယ အချက်သည်ကား လက်ရှိတွင် ဖြစ်နိုင်ချေ အများဆုံး ဖြစ်သည်။ မြန်မာ အရေးတွင် တရုတ်သည် ဗြောင်ကျကျ စွက်ဖက်သည့် လမ်းကို ရွေးချယ်ပါက အာဆီယံ နိုင်ငံများ အပါအဝင် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ ဆန့်ကျင်ခြင်းကို ခံရတော့မည် ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် တရုတ်သံရုံး၏ ကြေညာချက်သည် ရာနှင့်ချီ၍ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသူများ အပေါ် စာနာစိတ် အလျှင်း မရှိ၊ အတ္တကြီးသူ မိမိတို့ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ကြည့်သူများအဖြစ် လူထု၏ မုန်းတီးခြင်းကို ပို၍ ပြင်းထန်လာအောင် ဆွပေးလိုက်သလို ဖြစ်သွားရသည်က အဖတ်တင်သွားခဲ့ရသည်။
တရုတ် ၏ ကြေညာချက်သည် ပြည်သူများကို တိုး၍ သတ်ဖြတ်ရန် အချက်ပေးသည့် စကားဟုပင် ဧရာဝတီ သတင်းတွင် သုံးသပ်ထားသည်။ ပြည်သူများက တရုတ် တို့၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ နှင့် ထုတ်ကုန်များကို သပိတ်မှောက်ကြရန် လှုံ့ဆော် လာနေကြပြီ ဖြစ်သည်။ သို့သော် တရုတ်တို့သည် မိမိတို့ အပြစ်ကို မိမိတို့ သုံးသပ်နိုင်ခြင်း မရှိကာ ပြည်တွင်းတွင် တရုတ် မုန်းတီးရေး နှင့် အကျိုးစီးပွား ပျက်စီးအောင် ပြည်ပမှ လှုံ့ဆော်ပေးနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားလာကြသည်။
အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ ၏ လုပ်ရပ်များက နဂိုကပင် မာရှယ်လောထက် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်နေပြီ ဖြစ်သော်လည်း တရုတ် အလိုကျ ရန်ကုန် တိုင်း အတွင်း မြို့နယ် ၆ မြို့နယ် နှင့် မန္တလေး တိုင်းတွင် ၅ မြို့နယ် အတွက် မာရှယ်လော ထုတ်ပြန်လာခဲ့သည်။
ပြည်သူများက နောက်တွန့်ဖို နေနေသာသာ ထုတ်ပြန်ခြင်း မခံရသော မြို့နယ် ရှိ လူထုကြီးက ၎င်းတို့၏ တော်လှန်‌ရေးသည် အထုတ်ခံရသော မြို့နယ် များလောက် ပြောင်မြောက်ခြင်း မရှိ၍လောဟုပင် အားငယ် လာကြသည်။ လှိုင်သာယာ ရှိ ပြည်သူများပင် အင်အား အလုံးအရင်းနှင့် လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆက်လက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ကို လေးစားဖွယ် တွေ့မြင်ရပေသည်။
ဘိုင်ဒင် အစိုးရ၏ ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများ ဖြစ်သော အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး နှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး နှစ်ဦးစလုံးသည် ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီယား နှင့် အိန္ဒိယ နိုင်ငံများသို့ ခရီးထွက်ပြီး ဘုံအန္တရာယ်ကြီးကို စုပေါင်း ကာကွယ်နိုင်ရေး အတွက် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ နှင့် မဟာမိတ် ဖွဲ့ရန် ဟူ၍ ပြောဆိုလာခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက်တွင် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးသည် ဝမ်ယီ အပါအဝင် တရုတ် ထိပ်တန်း အရာရှိကြီးများ နှင့် အလက်ဆကာ ရှိ အင်ကာရပ်ခ်ျ တွင် လူချင်း တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာ အနေအထားသည် အမေရိကန် တို့ဖက်မှ လက်ဦးမှု ယူနိုင်ခြင်းမရှိ တုန့်နှေးနေမည် ဆိုလျှင် ဆီရီးယား ပြည်တွင်းစစ်တွင် ရုရှားတို့ ဝင်ကူခဲ့သည့် အတွက် နေ့လားညလား ဖြစ်နေသော သမ္မတ အာဆတ် တယောက် ယခုတိုင် သက်ဆိုး ရှည်နေသည့် နမူနာ များက ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။
သို့သော် တရုတ် အစိုးရ အဖို့ ရုရှား ကဲ့သို့ မဟုတ်၍ ကမ္ဘာတဝှမ်းတွင် စီးပွားရေး အရ နယ်ချဲ့လိုသော ရည်ရွယ် ချက်များ ရှိနေသဖြင့် လူသတ် အာဏာသိမ်း အဖွဲ့ကို အကာအကွယ် ပေးနေသည့် လုပ်ရပ်က ၎င်းတို့ အတွက် ကြီးမားစွာ ရိုက်ခတ်ခံရမည့် အရေး ကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားကြမည်လည်း ဖြစ်သည်။
ဒေါက်တာ ဆာဆာ က တော့ မင်းအောင်လှိုင်သည် ကဒါဖီ၊ ဆက်ဒမ်ဟူစိန် နှင့် အိုစမာ ဘင်လေဒင်တို့ ၏ သွားရာလမ်း သို့ ဦးတည်နေပြီ ဖြစ်သည်ဟု စကိုင်းနယူးစ် နှင့် တွေ့ဆုံခန်းတွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ မှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ယခုအချိန်အထိ သေဆုံးသွားသူ စုစုပေါင်း ၁၃၈ ဦး ရှိလာပြီ ဟု သိရပြီး တနင်္လာနေ့တွင် စစ်တပ် လက်ချက်ကြောင့် မန္တလေး၊ မြင်းခြံ နှင့် အောင်လံ မြို့များ တွင် နောက်ထပ် ၁၅ ဦး ထပ်မံ ကျဆုံးသွားခဲ့သော်လည်း ပြည်သူများ၏ ဆန့်ကျင် အုံကြွနေမှုများမှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းက အံ့အားသင့်စရာ ကောင်းလှအောင် လျော့ကျသွားခြင်း မရှိခဲ့ပေ။
ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ကမ္ဘာနိုင်ငံများ သွေးစည်း ညီညွတ်စွာ ဖြင့် မြန်မာပြည်သူများကို အကူအညီ ပေးကြ ပါရန် ပန်ကြားလိုက်သည်ဟု ပြောခွင့်ရ စတက်ဖနီ ဒူဂျာရစ်က ဆိုသည်။ ပြည်သူများအတွက် မထင်မှတ်သော အလေးသာမှုများက အချိန် နှင့် မရွေး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေသည်။
Fortify Rights လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ကြီး မှ စစ်အာဏာသိမ်းသူများ သည် နေ့စဉ်နှင့် အမျှ လူသတ်မှု ကျူးလွန် လာနေသဖြင့် ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံ အရေးပေါ် အထူး အစည်း အဝေးကြီး ခေါ်ယူပြီး လိုအပ်သည့် အရေး ယူမှုများ ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လုံခြုံရေး ကောင်စီ တွင် တရုတ် နှင့် ရုရှား တို့၏ ဗီတို အာဏာများ ရှိနေသဖြင့် ယခုအချိန်အထိ ကြေညာချက် နှစ်ခုသာ ထုတ်ပြန်နိုင်ပေသေးသည်။
ထိုအနေအထားကို ကျော်လွန်၍ ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံကြီးအား လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်ပေးထားသည့် Uniting for Peace ဆိုသည့် ၁၉၄၇ က ဆိုဗီယက် ဗီတိုကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ချမှတ်ခဲ့သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် အတိုင်း ဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု တောင်းဆို သည့် ကြေညာချက် ကို ထုတ်ပြန်၍ တိုက်တွန်းလိုက်သည်။ ထိုသို့ သော အစည်းအဝေး ကျင်းပရန် မည်သည့် နိုင်ငံကမဆို တောင်းဆိုခွင့် ရှိပြီး နိုင်ငံအများစုက သဘောတူလျှင် နှစ်ဆယ့် လေးနာရီအတွင်း ကျင်းပပေးရန် တာဝန် ရှိနေသည်။
ထိုအစည်းအဝေးမျိုးကို ယခုအချိန်အထိ ဆယ်ကြိမ်သာ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်သော်လည်း လေးကြိမ်တွင် လက်နက် ရောင်းချမှု ပိတ်ဆို့ခြင်း၊ နှစ်ကြိမ်တွင် စီးပွားရေးအရ အလုံးစုံ ပိတ်ဆို့ အရေး ယူခြင်း နှင့် တကြိမ်တွင် ကုလ ငြိမ်းချမ်းမှု ထိန်းသိမ်းရေး တပ်များ စေလွှတ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ် အရေးယူနိုင်ခဲ့သည့် အစဉ်အလာများ ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။
ယခုအခါ တရုတ်က ဗြောင်ကျကျ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်လာမည့် အရေး နှင့် မင်းအောင်လှိုင် ၏ အာဏာသိမ်း အဖွဲ့သည် တိုင်းပြည်ကို ဆက်လက် အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း မရှိတော့သည့် အဖြစ်ကို တွေ့မြင်လာနေရသည့်အတွက် တပ်တွင်း တွင် စိတ်ဓါတ်များ ချောက်ချားလာနေပြီး မိမိတို့ အဖို့ ယခုလို လမ်းပေါ်တွင်လူများကို နေ့စဉ်လို ပစ်ခတ်
သတ်ဖြတ် နေရတော့မည်လား ဟု မေးခွန်းများ သေချာပေါက် ထွက်ပေါ်လာနေပြီ ဖြစ်သည်။
မင်းအောင်လှိုင် အဖို့လည်း လက်ရှိ အကျပ်အတည်းကို အခြားနည်းလမ်းဖြင့် ရုန်းထွက် နိုင်အောင် စဉ်းစား ကြံဆနိုင်သူ မဟုတ်မှန်းလည်း တနေ့တခြား သိသာလာနေရသည်။
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်!!! Hla Soewai